आँखा फर्फराउने कुरामा धार्मिक मान्यता vs. विज्ञानः के छन् दुबैका दावी ? - Everest Dainik - News from Nepal
आँखा फर्फराउने कुरामा धार्मिक मान्यता vs. विज्ञानः के छन् दुबैका दावी ?
रामायणदेखि महाभारतसम्म, वैदिक र उत्तरवैदिक हिन्दु साहित्यमा आँखा फर्फराउनुलाई नराम्रो अर्थमा लिइन्छ । खासगरी बायाँ आँखा फर्फराएमा त्यसले अशुभ संकेत गरेको भनेर अहिले पनि डराउने गर्छन् मानिसहरु ।
हिन्दू साहित्यमा लेखिएजस्तो कुरा विज्ञानले मान्दैन । विज्ञानले आँखा दुख्नु र शुभ अशुभ हुने कुराबीच कुनै तादाम्यता देख्दैन ।
के छ छन् दुबैका दावी ?
धार्मिक मान्यता अनुसार, आँखा फर्फराउने कुरा
याे पनि पढ्नुस सवारी चालक र सहचालकको आँखा परीक्षण शुरु
विज्ञानले भने यस्तो भन्छ
आँखा फर्फराउनु भनेको आँखाको मथिल्लो या तल्लो परेला अनियन्त्रित रूपमा कम्पन हुनु हो । विशेष गरी आँखाको माथिलो परेला फर्फराउने गर्छ ।
आँखा फर्फराउनुलाई मेडिकल भाषामा ‘ब्लेफारोस्पाज्मु भनिन्छ । यसले दुवै आँखाको मांसपेशीमा प्रभाव पार्छ । कसैको आँखा केही क्षणका लागि मात्र फर्फराउने गर्छ भने कसै कसैको तीन र चार महिनासम्म पनि फर्फराउन सक्छ । पुरुषको तुलनामा महिलामा आँखा फर्फराउने समस्या बढी देखिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस आँखाको उमेर कति वर्ष ?
ट्याग्स: eye, Eye Flickering